Araara ABO fi Mootummaa: Miseensonni WBO Xoollayi jiran mormiirra jiru - BBC News Afaan Oromoo
Waamicha Abbootii Gadaa fi Uummata Oromootiin hidhannoo hiikkatanii torbanoota muraasaan dura qabsoo karaa nagaatti kan makaman miseensonni WBO, yeroo ammaa mooraa leenjii Xoollaayitti gidiraa argaa jiraachuu BBCtti himaniiru.
Miseensa Waraana Bilisummaa Oromoo kan Xoollay jiru kan ta'an Caalchisaan haalli keessa jiran baayyee yaaddessaa ta'uu dubbata.
''Kan nu marsee nu eegu Raayyaa Ittisa Biyyaa, Poolisii Federaalaa fi qaamolee tikaa hedduudha. Nageenya keenyaafis hedduu yaaddofna.
Waanti nu nyaannu dhibee nutti fidaa jira. Daabboo fooliin isaa badaa nuuf kennu. Nyaatni nuuf kennan waan nuuf hin mijanneef nyaata malee jiraanna.'' jedha Caalchisaan.
''Rakkoo bishaanii hamaatu jira. Bakki jiraannu qulqullina hin qabu. Jaallan hedduun nu jalaa dhibamanii gidirfamaa jiru. Manni yaalaa hin jiru.
Kilinika jirtu tokkotti namoota dhukkuban naqanii achitti nama ogummaa hin qabneen giluukosii dhukkubsataatti kaa'anii rakkisu,'' jedha.
''Leenjii jedhame nuuf kennaa hin jiran. Mana tokkotti walitti nu qabanii jiru. Kan dhufee nu mariisisullee hin jiru. Koree asitti nu fidellee nurraa kutan. Afaan qawweetiin eegamaa jirra. Nama rakkoo keenya himannu hin qabnu. Abbaa Gadaas nurraa kutan.''
Waraana Bilisummaa Oromoo kan Zoonii Lixaa kan hoogganutti aanuun waraana baha wollaggaa keessa socho'u kan ajajaa ture Hundee Dheeressaa yookiin maqa qabsoo Diinaraas jedhamuun kan beekamu waraanasaa qabatee erga deebi'ee gara xoollayi imalee ture, isa waliinillee walarginee hin beeknu jedhu miseensonni WBO.
Ergasii amma ji'a tokkoof deemna, waanti abbootiin gadaa nutti himanii fi kan asitti argaa jirru wal hin simu, amma nama nu dhagahus dhabnaan hookkara kaasne jedha.
''Har'a mormiirra jirra. Nyaata lagannee mormaa jirra. Gaaffiin keenya nuuf hin deebine. Nyaati nuuf dhiyaatu kan dhala namaaf dhiyaatu miti.
Waraanni Beegiitti Abbootii Gadaan wayita simatamu
Kun sirrachuu qaba. Qaamoleen eegumsaa nu dararuu hin qabu. Qaamni nutti rakkoo keenya ittti himannu nu daawwachuu qaba. Kanneen turan gaaffiin keenya.''
Kana malees hidhamtoonni xoollay jiran akka gadi dhiifamaniif gaafanneerra kan jedhu Caalchisaan ''as Xoollaay keessa hidhamtoota 2000 ta'an jiraachuu quban qaba, nutis namoonni 800 taanu isaanirraan adda hin jirru,'' jedha.
Rakkoon jiru dhugaa ta'uu kan dubbate Hundee Dheeressaa yookiin Diinaraas miseensonni haala qilleensaatti baruu dadhabuu fi qulqullina dhabuu mooraa akkasumallee hanqina nyaataatiin rakkachaa jiraachuu nutti himeera.
Jalqaba wayita Abbootii Gadaatiin simataman waraansaa waliin gara Xoollaay imaluusaa kan dubbatu Diinaraas, battalumammoo hooggantoonni Waraana Bilisummaa Oromoo walga'iidhaaf barbaadamtu jechuun nu fuudhanii Bishooftuutti na dabarsan jedha.
Miseensonni Waraana Bilisummaa Oromoo wayita deebi'an mooraa leenjii Sanqallee akka turan fedha qabu. Gaafataniis turan.
Garuu gaaffiinsaanii didamuun garaa Xoollay deeman. Wayita achi deeman ammoo torbe tokkoo hanga ji'a tokkoo caalaa hin turtan, isa booda isiniif jijjiirra jedhamaniiti.
Garuu jijjiiruun hafee amma namuu akka dhaqee hin ilaalle dhorkamaniiru,'' jedha Diinaraas
Koreen miseensota 71 of keessaa qabu Abbootii Gadaa, Abbootii Amantaa, Jaarsolii biyyaa fi beektotarraa hundaa'ee mootummaa fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti araara buusuurratti hojjechaa tureera.
Koreen kun ji'a tokkoon dura akkaataa walii galtee mootummaa fi Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaarratti walta'aniin Waraana Bilisummaa Oromoo bosonaa baasee simataa tureera.
Haata'u malee garuu hanga yoonaa namni dhufee nu daawwate hin jiru jechuun miseensonni Waraana Bilisummaa Oromoo mooraa xoollay jiran komii eegalaniiru.
Miseensa Koree teekinikaa kanaa kan ta'an Obbo Baqqalaa Garbaa msieensonni Waraana Bilisummaa Oromoo mooraa leenjii jiran rakkoo keessa jiraachuu quba qabaannus akka dhaqnee ilaaluuf mootummaan nuuf iyyamuu dideera jedhan.
''Koreen kun dhaqee akka ilaaluuf iyyama gaafachaa turreerra. Garuu koreen deemee dubbisuu akka hin dandeenye nutti himamee jira.
Nyaata lagachuudhaan akka mormiirra jiranis natti himaniiru. Ergasii garuu bilbilli waan dideef deebisee dubbisuu hin dandeenye,'' jedhan.
''Ammaan booda waan ta'aa jiru quba qabaachuu hin dandeenyu. Rakkoon isaan keessa jiran maal akka ta'e hubachuu dhabuun keenya baayyee nu yaaddessa.
Itti gaafatamummaa nurra jiru ba'uu keessattis dhiibbaa guddaa nurratti uumee jira.Kanaaf karaa dandeenye hundumaan isaan qaqqabnee dubbisuudhaaf yaalii ni goona.Ammas akka warri mootummaa nuuf iyyamaniif ni ijibbaanna.''
Kanaan duras rakkoon mudate utuu hin beekin wayita nuti waraana kana daawwachuuf garas imalletti nu dhorkanii turan kan jedhan Obbo Baqqalaan walii galteen mootummaa wanti mootummaa fi koreen walta'ee ture beekamtii keenyaan ala cabaa jira jedhan.
''Namoota achi keessa jiraniifis ta'e mootummaadhaaf dhaqnee daawwachuun keenya bu'aa qaba jennee yaanna. Garuu sababa hin beekamneen walii galteen nuti duraan irra geenyee turre cabeera.
Mootummaan utuu durumaanuu daawwachuu hin dandeessan nuun jedheera ta'ee silaa hojii kanattiyyuu hin gallu. Amma dhumarraan ga'ee waraanni harka mootummaa waan galee jiruuf daawwachuu hin dandeessan jechuunsaa seerrii fi heerri biyyaa cabaa jiraachuusaa mul'isa.'' jedhan.
''Warranni kunneen waraana ibooji'amtoota miti. Yookaan koolugaltoota miti. Namoota nageenya barbaanna jedhanii waamicha uummatasaanii fi Abbootii Gadaa akkasumas dhaabasaanii kabajanii dhufaniidha.Ulfina guddaadhaan simatamuutu irra ture.
Amma garuu ulfna dhabanii akka nama hidhamaa tokoottillee ilaalamuu dadhabanii namni akka dhaqee hin ilaalle gochuun tasuma biyya kana keessatti fudhatama kan hin qabneedha.''
''Qabiinsi namoota as ga'anii namoota hin galin jiraniif murteessaadha''
Karoorri araaraa qabame akka hin mikoofne kan gochaa jiru qaamuma mootummaati kan jedhan Obbo Baqqalaan namoota galan kunuunsuu dhabuun araara kanatti danqaa ta'uudha jedhan.
''Qabiinsi namoota as ga'anii namoota hin galin jiraniifis baayyee murteessaadha.Amantaasaan koree fi mootumaa akkasumas egeree isaaniifi biyyasaaniirratti qabaniifis baayyee murteessaadha.
Amma tarkaanfiin fudhatame kun waan hunda kana kan diigu ta'eeti kan nutti mul'atu. Adeemsa deemaa turre hundumaa kan bishaan itti naqan ta'eeti kan nutti mul'atu. Kanaaf baayyee gaddina.''
Akkaataa qabiinsa miseensota Waraana Bilisummaa Oromoorratti komii ka'aa jiruuf deebii mootummaa baruuf yaaliin taasisne hin milkoofne.
Mariin araaraa mootummaafi ABO gidduutti magaalaa Ambootti taasifamaa jira